Ireo sakana enina mankany amin'ny Global manerantany amin'ny e-varotrao | Martech Zone
Ny fiovana amin'ny fivarotana omnichannel dia hita miharihary, izay vao notohanan'ny Ny hetsika nataon'i Nike hivarotra amin'ny Amazon sy Instagram. Na izany aza, tsy mora ny fanovana ny varotra ampitan-dranomasina. Ny mpivarotra sy ny mpamatsy dia miady amin'ny fitazonana ny fampahalalana momba ny vokatra tsy miova sy marina manerana ny sehatra rehetra - hany ka 78% ny mpivarotra dia tsy maharaka ny fangatahan'ny mpanjifa mihamitombo mangarahara.
45% ny mpivarotra sy ny mpamatsy no very vola $ 1 + tapitrisa noho ny fanamby atrehana rehefa mampiditra ny fahaizan'ny lakandranon-tserasera amin'ny paikadin'izy ireo.
1WorldSync, mpamatsy vahaolana lehibe momba ny atiny vokatra, namoaka ny infographic etsy ambany miorina amin'ny Fanoritana ny làlana ho an'ny varotra manerantany fianarana.
Ampidino ny fianarana
Sakan-dalana iraisana mankany amin'ny Global manerantany amin'ny E-Varotra
Ny infographic dia manasongadina ny sakana omnichannel mahazatra ho an'ny mpivarotra sy ny mpamatsy, ary koa ny fomba ahitan'ny mpitondra tsena ireo sakana ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana rafitry ny fampahalalana momba ny vokatra mifototra amin'ny rahona.
fifandraisana - ny rafi-panazavana momba ny vokatra efa misy dia tsy manome sehatra tokana hananganana sy hanakalo ny atiny misy kalitao amin'ny mpiara-miasa varotra.
Exchange - ny rafitry ny fampahalalana momba ny vokatra efa misy dia tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny mpiara-miasa aminy.
fanarahan-dalàna - Sahirana ny mpamatsy mba haharaka ny fenitra mifehy ny firenena.
Quality - ny mpivarotra dia tsy afaka manome famaritana vokatra mahasarika sy mahasarika ary avy amin'ny mpiara-miombon'antoka mpamatsy.
omnichannel - Sahirana ny mpivarotra manangona sy mizara fampahalalana feno sy tsy miova ary azo itokisana amin'ny fantsona rehetra.
Transparency - tsy maharaka ny fangatahan'ny mpanjifa miharihary ny mangarahara amin'ny vokatra ny mpivarotra.
Tags: 1worldsyncAmazonolanarafitry ny fampahalalana momba ny vokatra mifototra amin'ny rahonafanarahan-dalànavarotra manerantanyFanamby amin'ny varotra manerantanyfanarahan-dalàna manerantanyfifandraisana manerantanye-varotra manerantanyFanamby amin'ny varotra eran-tanyfifanakalozana manerantanyomnichannel manerantanymangarahara manerantanyInstagramvarotra instagramNikerafitra fampahalalana momba ny vokatra
30 Aogositra 2017 amin'ny 12:43 PM
Amin'ny fikatsahana hanampy ireo vokatra fandefasana entana avy any Shina dia toa misy antony iray tsy miovaova, ary toa nokapohinao ny lohanao. Fifandraisana taloha sy fifampitokisana izany. Voalohany, mila mahazo antoka ianao fa ianao (sy ny mpivarotra anao) dia miteny ilay fiteny mitovy amin'ny ara-bakiteny sy ara-panoharana.
Vintana sambatra isika, ary miteny izany amin'ny lela kely HUMONGOUS any Etazonia aho mba hijanonana tsy ho eo amin'ny rafitra metrika ho toy ny fomba fandrefesana sy fandanjana zavatra.
Ho fanampin'izay, misy ny olana momba ny vola. Miova haingana ny vola, izay mety ho fifanarahana arbitrage taloha dia mety hivadika ho fifanarahana tsy dia lehibe loatra. Ao amin'ny tontolon'ny fandefasana entana dia tokony handeha tsy hilaza fa manantena sy mivavaka ianao mba hahatakaran'ilay mpandefa ny fangatahana mba tsy hampahafantaran'izy ireo ny mpividy fa efa nandoa .75 ianao ho an'ireo zana-trondro, raha mbola nandoa anao 9. Serasera kely sarotra tokoa.
Tonga amin'ny serasera tsara izany rehetra izany. Antenaina fa amin'ny fampiasantsika ireo endrika mitovy amin'ny SaaS, dia ho lasa mora kokoa ny fahaizana mifampiresaka.
Ankehitriny taorian'ny nanoratako izany rehetra izany dia tokony ho nilaza fotsiny aho hoe "Ditto". 😉